Ukususwa kweenwele zeLaser, ukususwa kweenaliti zeenalf-Sano
Ukwakhiwa kwemisipha ye-EM
I-Beijing Sano laser Development S & T Co, Ltd. Ngaba ngumenzi wobuchule bobuhle kunye noomatshini beLaser e-China. I-Sano lasers ineziko lophando kunye nophuhliso, iklinikhi, ukuthengisa kunye namasebe emva kokuthengisa; Unokunikezela ngenkxaso yobuchwephesha bobuchwephesha kunye nedatha yekliniki okokuqala. Sinokukugcina uhlala uphambili kwicandelo lobuhle, ngenxa yeqela lethu lobuchwephesha elidibanisa ngokukhanya, oomatshini, umbane kunye neyeza.
Ukusukela ngo-2005, uSano Laser Companyh usebenza ngokuqhubekekayo kwaye ngoku unamalungelo epropathi azimeleyo epaki yemizi-mveliso, engaphezulu kwe-100,000 m2, nangaphezulu kwabasebenzi abali-150. Kwakhona simisela inkampani yesebe eHong Kong. Sithathe inxaxheba kwimiboniso yezizwe ngezizwe minyaka le. Ngeenzame, i-Sano laser Inkampani yafumana inani lezatifikethi zonyango lwasekhaya nakwamanye amazwe kwizixhobo zakhe ezahlukeneyo, ezinje nge (TUV) Medical CE, (TUV) ISO 13485, FDA (US) Certificate; Kunye nelungelo lokungenisa kunye nokuthumela kumazwe angaphandle isatifikethi, iiMvume zoShishino lweeMveliso zeSixhobo soNyango kunye neSatifikethi seShishini esiPhakamileyo.
Ephathekayo Q Tshintsha Nd Yag Laser ukususwa umvambo p ...
2021 High Power HOT Ukuthengisa Picosecond Laser Pr ...
Umatshini wokuqinisa ulusu we-RF i-rf nee ...
China Factory ethengisa izihlunu scre ...
Kwamaza kathathu (755nm / 808nm / 1064nm) diode l ...
P-Mix 755 + 808 + 1064nm diode laser ukususwa iinwele m ...
Umthengisi wethu oKhethekileyo eTurkey ngeLas yethu ...
Siyavuyisana nentsebenziswano yethu nomthengisi wethu okhethekileyo waseTurkey ngomatshini wethu wokususa iinwele ukusuka ngomhla we-10, Okthobha 2018 ukuya kwi-10, Okthobha 2022! Kubathengi be-Iran abanomdla kumatshini wethu wokususa iinwele we-laser, nceda unxibelelane nomthengisi wethu okhethekileyo wase-Iran.
1: i-freckle Igama: Iminyaka: 21. Umsebenzi: Uphawu lomfundi: Lubonakala ngombala omdaka okanye umbala omdaka ngombala omnyama, osisangqa, okweqanda okanye ongaqhelekanga. Umda ucacile, ububanzi bu malunga ne-2mm, umphezulu ugudile, ubodwa kwaye awudityaniswanga, kwaye ukuhanjiswa kwahlukile. Ukuchongwa: i-freckle Uhlalutyo lwezifo: Isigulana sikhuthaza ...
Inkampani ye-Sano Laser iyaya eDubai, eSpain, e-Itali, eTurkey, ePoland, naseRomania kwimiboniso minyaka le. Lo ngumfanekiso xa sisiya e-India Exhibition. I-India yeyona ntengiso iphambili kwinkampani yethu. Sinosasazi oluninzi eIndiya. Kwaye siza eIndiya 3-4 amaxesha kanye ngonyaka. E-Turkey umboniso, i-diode laser, ulusu olupholileyo kunye ne-picosecond Nd yag laser ma ...
Umatshini weLaser we-Co2, Shr IPL Khetha, Ubuhle be-CO2 Laser, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Ukususwa kwamabala amabala,